Izithako zokudla | | Ukudla & Ukudla | Amakhasi ombala wamahhala wokulanda
Izithako zokudla zisekela ukulahlekelwa kwesisindo
Izinzuzo zemikhiqizo ehlukene
Uhlu lwezithako zokudla ukuze ulahlekelwe isisindo lukhulu. Bonke bathembisa ukulahlekelwa kwesisindo ngaphandle kokulamba ngaphakathi kwesikhashana. Konke lokhu ngaphandle kwamacebo amaningi okudla ngisho nokuzivocavoca. Kodwa yini ebaluleke ngempela mayelana nemikhiqizo eminingi yokulahlekelwa kwesisindo? Gcina isithembiso sakho noma uzibonakalise ngisho nokungahambi kahle?
Lezi amaqembu omkhiqizo athandwa kakhulu
Das Ukunikezwa kwezidakamizwa zokudlaLeso sithembiso kuyashesha futhi esimeme kwesisindo riesig.- amaprotheni okunyakazisa, ngokuthi Formula indlela yokudla ehambisana nempilo kukhona ikhalori ongaphakeme futhi ahlanganiswe izakhi ezibalulekile amaprotheni powder.
Izithako eziphezulu nezokudla
Detoxifiers ngeke dehydrate umzimba ulahlekelwe isisindo verlieren.- blocker amafutha, izitofu fat futhi ukuvimbela udoti enikeziwe ngokudla Fette.- Kohlehydratblocker zivimbela Verdauungsenzym.- adingekayo carbohydrate-eqhekeza
Ukunciphisa ukudla kunciphisa umuzwa wendlala ngezithako ezifana ne-caffeine, guarana noma iziqephu zomlingani.- I-Superfood smoothies ithembisa isisindo sokulahlekelwa ngaphandle kokudliwayo; ziphephile ngempela.
Yonke yale mikhiqizo kuthiwa ikusize ulahlekelwe isisindo futhi uzizwe unempilo futhi uvumelane phakathi nesikhathi esifushane.
Wonke umkhiqizi owodwa wale mikhiqizo yokudla uthetha ngokuqiniseka okukhulu ukuthi umkhiqizo wabo uholela ekunciphiseni okunamandla kokuqina kwesisindo somzimba. Futhi konke ngaphandle Ukushintsha kokudla noma ukuzivocavoca okukhulu.
Ingxenye yalokho okuhlangenwe nakho okusebenzayo kuhambisana nalezi zithembiso. Noma kunjalo, ukuncishiswa kwesisindo ngosizo lwezithako zokudla kufanele kucatshangelwe ngokucophelela. Ngoba uhlu lwezinto eziyingozi kungenani uma nje izinzuzo.
Phakathi kwezidakamizwa eziphumelela kakhulu yizidlo zokufomula, lapho amaprotheni powder kanye / noma ama-superfood ahlanganiswa namanzi ukuze enze ukuxubha. Le mikhiqizo ekhethekile iyakwazi ukuqhubeka nokudla okubangelwa yimpumelelo esheshayo.
Okunye okunye kubantu abanempilo enempilo banqanda ukucindezela ukudla okucindezela umuzwa wendlala. Ikakhulukazi uma usuka ekudleni okuphezulu kwekhalori ukuze ube nokudla okunempilo, lezi pilisi zizosiza isikhathi esincane. Ukulahlekelwa kwesisindo kulokhu kubangelwa ukudla okuncishisiwe kwekhalori kumongo wokudla okuziwayo.
Ngo okuthiwa amanoni Kohlehydratblockern khona ngokuvumelana Stiftung Warentest Ayikho izifundo nge ubufakazi obuqand 'ikhanda Effekte.Kein Ukudla kusho ngaphandle NachteileKohlehydratblocker kungaba imbangela sohudo ukubuyisa ngenkathi ethatha blocker kungakhishwa amafutha nemiphumela engemihle ezifana incontinence fecal, amajaqamba esiswini noma amavithamini.
Ngesikhathi esifanayo bayathonya imiphumela yemithi efana nephilisi yokulwa nezingane.
Kodwa Izithako zokudla babe ngaphezu yo yo umphumela okwengeziwe ukusetshenziswa Nachteile.- eside wamaprotheni unikina: izinkinga kwegazi, ukuqunjelwa, kuliphazamise Elektrolythaushalt.- Detoxifiers: ngokweqile amazinga acid uric, ushukela ephansi igazi, Kaliummangel.- iphango: izingozi ezahlukene kubantu isifo senhliziyo noma umfutho wegazi ophakeme.
Kuye kwafakazelwa ukuthi izithako zokudla okunjengamaprotheni okuthuthumela noma ukucindezela ukudla okunomsoco zinikeza isiqondiso esihle nesisusa esikhathini esilinganiselwe. Yonke iminye imikhiqizo iphakanyiswa ngokomthetho kuphela
Ukulahlekelwa isisindo ngaphandle kokulamba, ngaphandle kokudla kanye nenjabulo
Ukudla - Kungani ukudla okuphazamisayo kukuncelisa
Amathiphu okusindisa amafutha
Ukudla - Iziphuzo Eziphansi Zama-Calorie
Ukudla - ngokucophelela ukulahlekelwa isisindo ngamathiphu amancane